NY FACTORY Vaovao
Fambolena vaovao Kailong manarona 70000 metatra toradroa mahery ny fananganana uner ary hanomboka amin'ny volana Jona 2022.
Ilaina ny fampitaovana Wax Pattern ho an'ny fametrahana fampiasam-bola rehetra. Ny fitaovana dia vita amin'ny aliminioma avo lenta, ary natao hanaiky ny fikorianan'ny savoka anidina amin'ny tsindry mafy, mba hamelana azy hivadika ho lamina savoka izay ampiasaina hamoronana lasitra vita amin'ny seramika mandritra ny famatsiam-bola ...
PROSESY FAMPIANARANA INVESTASIANA
Ny casting castingcan dia azo antsoina hoe "casting casting" na "casting silica sol" na "casting wax" na "casting de-waxing". Ny fitaovana fanariana dia azo ampiasaina betsaka, ary tsy misy fetra ny endrika bikan'ny vokatra ary koa ny firafitra sarotra. Ny tena manafatra ...
Toro lalana sy fandefasana DESIGN
Ny fahombiazana farany amin'ny famolavolana fanariana dia miankina amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny mpamolavola sy ny injenieran'ny mpandrafitra. Rehefa ampahafantarina tsara momba ny fitakiana ampahany ny fitrandrahana dia matetika misy marimaritra iraisana amin'ny famaritana izay ahafahan'ny fanarahan-dalàna faran'izay betsaka hanonta ...
Impeller Pump Pump Centrifugal, Impeller paompy, Impeller paompy vy, Casting Impeller paompy, Tranom-paompy, Masinina singa,